Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo maanta heshiis dhowr qodob ka kooban kala saxiixday (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo maanta heshiis dhowr qodob ka kooban kala saxiixday (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta xarunta madaxtooyadda Kenya ee magaalada Nairobi kulan kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta.
Labada madaxweyne ayaa kulankooda uga wada hadlay dhowr arrimood oo ku saabsan xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin socdaalka, iskaashiga, ganacsiga, ammaanka iyo arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Kenya.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku kulmaan islamarkaana uga shaqeeyeen sidii loo fududeyn lahaa duulimaadyadda tooska ah ee isku xirayay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi.
“Waxaan ku amarnay mas’uuliyiinta ammaanka ee labada dal in ay si dhaqso ah u kulmaan, ayna ka heshiiyaan sidii dib loogu bilaabi lahaa duulimaadyadii tooska ahaa ee isku xirayay Muqdisho iyo Nairobi, waana in duulimaadka ugu horeeya ku bilawdaa labo toddobaad gudohood, waxa kale oo aan ku heshiinay in dadka sita baasabooradda diblomaasiga iyo shaqaalaha dowladda ee labada dal aan looga baahan doonin in ay soo dalbadaan dal-ku-gal.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa marka hore ka mahadceliyay sida diirran ee dowladda iyo shacabka Kenya ay usoo dhaweeyeen, wuxuuna tilmaamay in Kenya ay tahay mid ka mid ah saaxiibada ugu muhiimsan oo ay leedahay Soomaaliya.
“Iskaashiga labadeena dal waxa uu lagama maarmaan u yahay inaan ka guul gaarno caqabadaha na haysta oo ay ka mid tahay argagixisada iyo saboolnimada, booqashadaan aan ku imid Nairobi waxay qeyb ka tahay sii joogtaynta iskaashi dhow oo labadeena dal ay ka yeeshaan dhinacyada amniga, maalgashiga iyo ganacsiga. Iskaashi dhow oo dhaqaale oo dhex mara Soomaaliya iyo Kenya ma wanaajinayo oo kaliya nolosha malaayiinta dadkeenna ah, ee sidoo kale waxa uu wax ka tarayaa xaaladda ammaanka ee bariga Afrika.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladiisa ay si dhow ula shaqeyn doonto dowladda Kenya, isagoo xusay in Kenya ay muddo labaatan sanno marti gelineysay qaxootiga Soomaaliyeed, isagoona tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay inay ka wada shaqeeyaan waxyaabaha caqabada ku ah, sida ammaanka, faqriga iyo la dagaalanka Argagixisada.
Ugu dambeyntii, dhammaan qodobada kale oo ay labada mas’uul ku heshiiyeen ayaa waxaa kamid ah in sida ugu dhaqsiyaha badan dib loo howlgeliyo xuduuda labada dal la isaga gudbo ee B/xaawo iyo Dhoobley, si ay u fududaato isku socodka dadka iyo badeecadaha isaga gudbaya labada dhinac.